စထရာဘော့နှင့်ပွဲမှ ဒဏ်ရာကြောင့် မန်ယူနှင့်ပွဲကို နေမာ လွဲချော်နိုင် - Yangon Media Group
စထရာဘော့နှင့်ပွဲမှ ဒဏ်ရာကြောင့် မန်ယူနှင့်ပွဲကို နေမာ လွဲချော်နိုင်
ပီအက်စ်ဂျီတိုက်စစ်မှူး နေမာသည် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမတိုင်မီက ရရှိခဲ့ဖူးသောဒဏ်ရာမျိုး ပြန်လည်ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း မန်ယူနှင့်ကစားရမည့် ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်ကို လွဲချော်ရဖွယ်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
နေမာသည် စထရာဘော့နှင့် ပြင်သစ်အက်ဖ်အေဖလား ၃၂ သင်း အဆင့်ပွဲစဉ်တွင် အချိန်တစ်နာရီကြာဝင်ရောက်ကစားခဲ့ပြီးနောက် ပြိုင်ဘက်ကစားသမား ဇမ်ဇီမီ၏ဖျက်ထုတ်မှုကြောင့် ညာဘက်ခြေချောင်းရိုး ထိ ခိုက်မိသည့်ဒဏ်ရာ ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နေမာသည် အဆိုပါဒဏ်ရာကြောင့် ဆေးရုံသို့သွားရောက်ကာ ကုသမှုခံယူ ခဲ့ရပြီး ဒဏ်ရာအခြေအနေကို စိုးရိမ်ပူ ပန်မိကြောင်း ပီအက်စ်ဂျီနည်းပြတူ ချယ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
နေမာသည် ယမန်နှစ် ဖေဖော် ဝါရီလက ခြေချောင်းရိုးကျိုးခြင်း နှင့် ခြေချင်းဝတ်ဒဏ်ရာများရခဲ့ဖူး ရာ ယခင်ဒဏ်ရာဟောင်းကို ပြန်လည် ထိခိုက်မိခြင်းဖြစ်သဖြင့် ကာလ ရှည်အနားယူရဖွယ်ရှိနေကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့ကြ သည်။
မီလန်တိုက်စစ်မှူး ဟီဂူအင်ကို ခြောက်လအငှားစာချုပ်ဖြင့် ချဲလ်ဆီးခေါ်ယူ၊ နည်းပြဟောင်းဆာရီနှ??
စိုက်ပျိုးရေးအင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာသင်တန်း GTI ကျောင်းအချို့တွင်ဖွင့်မည်
ရေနံထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်နေသဖြင့် ရေနံဈေးနှုန်း ကျဆင်းနေ
ကိုယ်စားလှယ်များ မေးခွန်းမေးမြန်းရာတွင် တိတိကျကျမေးရန်နှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ ကျိုးကြောင?
ကြွက်သား ဒဏ်ရာကြောင့် ဘာစီလိုနာနှင့်ပွဲကို ဖာမီနို လွဲချော်မည်၊ ဦးခေါင်း ထိခိုက်မိသော ဆာ??
နှစ် ၁၃ဝ သက်တမ်းရှိ ရန်ကုန်မိလ္လာစနစ် ပြောင်းလဲမည်၊ ရေဆိုးသန့်စင်စက်ရုံများ တိုးချဲ့တည်ဆော
ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ ဘုံလုပ်ငန်းစဉ်၊ မျှော်မှန်းချက်နှင့် စံတန်ဖိုးများကို ရှာဖွေနိုင??